Cape Town – ONgqongqoshe bemiNyango eZimbabwe sebephasise izinhlelo zokuthi kuguqulwe imizi emidala yezikhulu yenziwe izindawo zokuheha izivakashi, ngenhloso yokuheha abantu ukuthi bavakashele emalokishini.
Abahlaziyi bezombusazwe baligxekile leli gxathu bathi uhulumeni uphelelwe yizinhlelo anazo.
AbeNewzimbabwe.com babike bathi uNgqongqoshe woMnyango wezeziMali uTendai Biti, bekulindeleke ukuthi amemezele imali ezosetshenziswa ukuphumelelisa lonke lolu hlelo.
Imizi ekulindeleke ilungiswe ihlanganisa loyo kaMengameli wezwe uRobert Mugabe, oseHarare, kulungiswe naloyo wephini lakhe elingasekho uJoshua Nkomo kanye nowaloyo owabe ephethe iZanu-PF u-Hebert Chitepo nowomsunguli wayo u-Enos Nkala.
Umbiko uthi lo mqondo ususelwe kuloyo waseNingizimu Afrika wokulungisa amalokishi enziwe izindawo zokuheha izivakashi, uNgqongqoshe wezokuVakasha uWalter Mzembi uthe uhlelo seluphasisiwe yiKhabhinethi.
Umhlaziyi wezombusazwe uPedzisayi Ruhanya ulugxekile lolu hlelo wathi lukhombisa ukwehluleka kukahulumeni.